GIAE-Guangzhou International Automobile Exhibition (AUTO GUANGZHOU) 2021
Nchekwa Cyber ​​​​& Cloud Expo Global zubere na Olympia London, London, UK
A ga-eme Decorex International na Olympia London, London, UK
A ga-eme ihe ngosi AIoT Korea na 2022-10-19 ruo 2022-10-21
Ọ WORLDụ AWA ỌH plannedR planned zubere maka 2022-06-02 ruo 2022-06-05
AutoRama zubere na George R. Brown Convention Center, Houston, USA
GIAE-Guangzhou International Automobile ngosi (AUTO GUANGZHOU) 2021
Ụlọ Ọrụ Weebụ http://autoguangzhou.com.cn/
Categories: Nchekwa onwe na-egosi
Kemgbe mgbanwe China na mmeghe afọ 40 gara aga
Kemgbe mgbanwe na oghere nke China afọ iri anọ gara aga, akụ na ụba na ọha mmadụ agbanweela nnukwu mgbanwe. Ulo oru na aka oru nile eguzobela uzo ha mepere-emepe n'usoro mgbanwe. N'ịbụ onye usoro mgbanwe na mmeghe na-eduzi, ụlọ ọrụ ụgbọala nke China enweela ọganihu ma na-eguzo mgbe niile na mmepe teknụzụ. O nyeere China aka itolite site na obere mba akpaaka gaa nnukwu ma kwalite ikike nnukwu akpaaka n'ụwa.
Ulo oru ugbo ala nke China na ebute ohuru ohuru ohuru ohuru.
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ụgbọ ala ndị China na-eweta ọhụụ ọhụrụ nke nkà na ụzụ nke na-akwado ọnọdụ ndị dị na ọkụ eletrik, netwọkụ, ọgụgụ isi, na nke dị fechaa. N'ihi ya, teknụzụ ọhụrụ na-enye ụlọ ọrụ ọdịnala ike mgbe niile; echiche njem ọhụrụ na-apụta mgbe niile, ụdị azụmaahịa ọhụrụ na-aga n'ihu. Site na mmepe na ngwa azụmahịa nke teknụzụ nkwukọrịta nke ọgbọ nke ise, njikọta njikọta nke ndị ọrụ mmepụta ihe na ngalaba ozi ga-ewepụta mmeghachi omume kemikal na-enwu enwu. Ugbo ala ndi China n’enye ume ohuru. Netwọk nwere ọgụgụ isi ga-eweta nnukwu echiche pụrụiche maka ụlọ ọrụ ụgbọ ala zuru ụwa ọnụ. Ulo oru ugbo ala nke China na agbanwe site na onye na-eso ya rue onye ndu. China na - agbanwe si n’uwa ahia ahia nke kasi uku karie n ’uwa nke kachasi elu na ihe ndi ohuru n’igwe. Ngbanwe ohuru ohuru ohuru ga-etinye ike ohuru n'ime ulo oru ugbo ala nke China. Ulo ahia di elu gha emeghe oge ohuru nke mgbanwe na nkwalite nke ulo oru ugbo ala nke China. Mmeri imekọ ihe ọnụ ga-abụ isi nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala zuru ụwa ọnụ na-achọ mmepe na China.
Mmepe nke teknụzụ na-enye ndụ mmadụ ndụ ebighi ebi.
Mmepe nke teknụzụ na-enye ndụ mmadụ ndụ ebighi ebi. Dị ka ụzọ dị mkpa maka njem maka ndụ mmadụ, ụgbọ ala na-enwewanye enyi na-arụ ọrụ n'ihi ọganihu na-aga n'ihu na teknụzụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, teknụzụ na-agbanwe nnukwu ụlọ ọrụ ụgbọ ala ọdịnala. Igbazinye oge na-adabere na teknụzụ ịntanetị mkpanaka akara akara njem ọhụụ. Drivingkwọ ụgbọala na-akpaghị aka dabere na teknụzụ ọgụgụ isi nke artificial nyere ndị ọrụ ọhụụ ọhụụ ọhụrụ. Teknụzụ ịkwọ ụgbọala eletriki etinyela ntọala ike ọhụrụ maka mgbanwe nke ụlọ ọrụ ụgbọala. Mmekọrịta nke ijikọ igwe eletriki, ọgụgụ isi, na ịkparịta ụka n'networkntanet emeela ohere na-enweghị njedebe maka iche n'echiche n'oge ọhụụ ọhụrụ. A na-ejikọ ụgbọ ala dị iche na netwọkụ njem. Industrylọ ọrụ ụgbọala na-agbanwe. Companylọ ọrụ ụgbọ ala ọdịnala na-emepe emepe site n'aka onye nrụpụta nye onye na-eweta azịza njem, na-etinye atụmatụ ụgbọ ala na imepụta na ọrụ njem. Gbọ ala na-agbanwe nwayọọ nwayọọ site n'ụzọ dị mfe maka ụzọ ndụ ka mma.
Rahimbay Ọnwa 2 ọnwa iri na otu
Ndewo, ọ ga -amasị anyị ịpụta na ihe ngosi ụgbọ ala elektrọnik na ebumnuche ime ọchụnta ego n'ọdịnihu. Kedụ ka anyị ga -esi akpọ oku maka nnabata visa?
Ambar Elektrik Ltd. Ọnwa 11 ọnwa iri na otu
Anyị bụ ndị Ambar Electrics si Uruguay, South America. Anyị ebula ụgbọ ala eletrik si China. Anyị ga-achọ isonye na Canton Fair na-esote iji nwee azụmaahịa.
Biko mee ka anyị mata ka esi aha.
ekwentị: +598 485 692
Mbar Electrics Ltd.
Eduardo González Eduan Ọnwa 11 ọnwa iri na otu
Solicitud de ndepụta maka ịkọwapụta ihe
Ali Kayed 1 afọ
Emezi ikpeazụ na 24.11.2020 20:03 site n’aka Ọbịa
AUTOMOBILE ngosi GUANGZHOU - AJ .J.
Ezigbo Sir \_ Madam,
Daybọchị ọma gị!
Naanị m chọrọ ịjụ maka Ngosipụta nke Ngosipụta Ngagharị na Guangzhou. Biko zitere m Ndepụta nke Ndị Ngosipụta.
Ọ ga-amasị m ịkpọtụrụ ma jụọ ụfọdụ ụdị ụgbọ ala mkpanaka. Biko lee foto dị na ya maka ihe nlele.
Enwere m ike ị zaghachi akwụkwọ ozi m ma zitere m ụfọdụ kọntaktị nke ndị na-eweta ngwaahịa maka nke a. Biko kpọtụrụ nọmba ekwentị m ma webụ maka ajụjụ ọ bụla ị nwere.
Ekwentị mkpanaka & Whatsapp: + 971 50 454 066
Ihe onyonyo nke 2020-11-24 na 3.08.26 PM 1.jpeg
alvaro carbajal Afọ 1 ọnwa 2
akakabarede kit auto electrico
requiero proveedores de kit de mgbanwe de auto electrico para taxis
Agbo Solomon .M. Afọ 2 ọnwa 1
Akwụkwọ ozi ịkpọ oku
IGWE STEPHEN UCHENNA Afọ 2 afọ 4
Anyị dị itoolu n'ọnụ ọgụgụ site na National Automotive Design and Development Council (NADDC) na Nigeria, Pls anyị nwere mmasị isonye na Cantonfair na -abịanụ na Guanghou China. Jiri nwayọ kwughachi eziokwu email m ma ọ bụ nọmba ekwentị m +234-08035996746 iji nyere anyị aka ịmalite usoro ahụ.
Akpaaka World China